Araka ny voalazan'ny "Hevitry ny fitarihana momba ny fanamafisana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ara-tontolo iainana amin'ny tetikasa fananganana "avo roa" navoakan'ny minisiteran'ny ekolojia sy ny fiarovana ny tontolo iainana andro vitsy lasa izay, ny indostrian'ny fanodinana aluminium dia tsy tafiditra ao amin'ny sokajy "Avo roa", fa ny aluminium electrolytic mbola voatanisa ao amin'izy ireo. Ny aluminium dia manana marika roa: ny iray dia "aluminium maitso"; ny iray kosa dia “avo roa sy renivohitra iray”. Ireo etikety roa ireo dia manana famaritana mifanohitra tanteraka amin'ny aluminium. Noho izany, iza no fandikana marina ny aluminium?
Ny hoe “avo roa sy renivohitra iray” dia midika fanjifana angovo be, loto ary loharanon-karena. Nanomboka tamin'ny taona 2005 io fanambarana io, ary natao hanara-maso ny fanondranana indostria mifandraika amin'izany sy hampiroborobo ny fanatsarana ny indostria ao an-toerana. Nanomboka teo, ao amin'ny antontan-taratasy politika navoakan'ny sampan-draharaha mifandraika amin'izany, ny aluminium electrolytika dia nosokajiana ho indostrian'ny "avo roa sy renivohitra iray". Taty aoriana, io fanambarana io dia nivoatra ho famaritana ny indostrian'ny akora fototra ao anatin'izany ny indostrian'ny aluminium.
Raha ny hevitry ny hoe "fananana iray" dia fantatra fa ny alimo no metaly manana tahiry betsaka indrindra amin'ny hoditry ny tany. Na dia somary vitsy aza ny tahirin'ny loharanon-karena aluminium ao amin'ny fireneko, amin'ny fampidirana ara-toekarena maneran-tany ankehitriny, dia tsy mametra ny fampivoarana ny indostrian'ny alimo ao amin'ny fireneko intsony ny loharanon-karena. Ny bottleneck lehibe. Araka ny antontan'isa tsy feno, manana harena bauxite eo amin'ny 10 miliara taonina eo ho eo any ampitan-dranomasina ny fireneko, ary mahatratra 90 tapitrisa taonina isan-taona ny fahafahan'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Amin'ireo fanafarana bauxite isan-taona, ny 50% dia avy amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any ivelany izay an'ny orinasa sinoa. , Ny fahafahana miantoka ny loharanon-karena dia nihatsara be.
Tsy izany ihany, fa ny tena zava-dehibe, ny fivoarana haingana ny indostrian'ny alimo ao amin'ny fireneko dia tsy vitan'ny hoe mampidi-doza ho an'ny loharanon-karena bauxite ao an-toerana, fa mitahiry loharanon-karena ho an'ny fampandrosoana ny indostrian'ny aluminium faharoa ao amin'ny fireneko. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, an-tapitrisa taonina ny alimo voalohany eto amin'ny fireneko no voahodina ho vokatra aluminium isan-taona. Ankoatra ny ampahany kely amin’ny fanondranana, ny ankamaroany dia fanjifana ao an-toerana. Ireo vokatra aluminium ireo dia nahatratra ny fe-potoana fandoavam-bola taorian'ny fampiasana 20-30 taona, izay afaka miantoka ny famokarana ny indostrian'ny aluminium efa misy sy ho avy. Raha tsy misy ny fampandrosoana ny indostrian'ny alimo voalohany ao an-toerana sy ny fampandrosoana ny tsenan'ny fampiharana aluminium, ny indostrian'ny aluminium faharoa dia tsy hanana na inona na inona hohanina, na mbola mila manafatra "fako vahiny", izay hoferan'ny hafa.
Hita fa ny fandrefesana ny fivoaran'ny indostrian'ny alimo eto amin'ny fireneko amin'ny fomba fijerin'ny loharanon-karena dia mbola mitaky fomba fijery manerantany. Amin'izao fotoana izao, ny hevitra momba ny "renivohitra iray" dia tena mifanohitra amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny aluminium amin'izao fotoana izao ary misokatra ho an'ny fanontaniana.
Momba ny tohan-kevitra "avo roa", ny indostrian'ny aluminium ho toy ny indostria mavesatra dia tsy azo lavina tanteraka, indrindra fa ny aluminium electrolytika ao amin'ny indostrian'ny angovo. Azo lazaina fa tsy misy aluminium raha tsy misy herinaratra. Na izany aza, ny aluminium electrolytic dia rohy iray ihany amin'ny rojo indostrian'ny aluminium. Amin'ny lafiny fampiharana, ny fitaovana aluminium dia lasa safidy voalohany ho an'ny fitaovana mitsitsy angovo amin'ny sehatra isan-karazany noho ny lanjany maivana, ny fanoherana ny harafesina ary ny fanodinana mora.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, miaraka amin'ny fanavaozana sy ny fanavaozana ny teknolojia sy ny teknolojia aluminium electrolytika ao amin'ny fireneko, ny tondro fitehirizana angovo sy fampihenana ny entona amin'ny famokarana alimo voalohany dia tsy mitovy amin'ny an'ny folo taona lasa izay. Amin'ny taona 2020, ny fanjifana herinaratra isaky ny taonina amin'ny aluminium electrolytika eto amin'ny fireneko dia ho ambany noho ny 13,543 kWh, fihenan'ny 8% eo ho eo raha oharina amin'ny 2005. Ny tondro fanjifana angovo dia teo amin'ny ambaratonga tsara indrindra eran-tany nandritra ny taona maro. Raha ny resaka entona entona mandatsa-dranomaso, tamin'ny taona 2019, dia 12.8 ny isan'ny entona entona mandatsa-dranomaso lanin'ny herinaratra tamin'ny fizotry ny elektrôlôly aluminium ao amin'ny fireneko, nidina 24% raha oharina tamin'ny taona 2006, ary ny tahan'ny fihenam-bidy no voalohany indrindra eran-tany.
Mandritra izany fotoana izany, ny tahan'ny fanodinana ny fitaovana aluminium dia mety hahatratra mihoatra ny 95%, ary azo averina im-betsaka. Na izany aza, ny fanjifana angovo sy ny entona maintso avy amin'ny famokarana aliminioma recycled dia eo amin'ny 5% amin'ny an'ny alimo voalohany ihany. Noho izany, fantatra amin'ny anarana hoe "vokatra fitehirizana angovo" sy "banky angovo" izy io.
Ny tena mampanontany tena dia ny entona mandatsa-dranomaso ao amin'ny indostrian'ny alimo dia vokatry ny herin'ny hafanana indrindra, ary ny herin'ny hafanana no fomba lehibe indrindra amin'ny famokarana herinaratra ao amin'ny fireneko, izay mahatratra 70% amin'ny totalin'ny famokarana herinaratra ao amin'ny firenena. Mazava ho azy fa vokatry ny fanavaozana indostrialy sy ny fanitsiana ara-drafitra eo amin'ny indostrian'ny herinaratra izany. Ny fanontaniana, nahoana no avelao ny indostrian'ny aluminium hikarakara izany?
Soa ihany fa noho ny fandrosoan'ny teknolojia fitahirizana angovo, dia hampiasaina betsaka amin'ny famokarana indostrialy ny angovo azo havaozina toy ny hydrogène, ny masoandro, ny rivotra ary ny hydropower. Amin'izao fotoana izao, miverina indray ny angovo nokleary ao amin'ny fireneko taorian'ny fampiatoana folo taona. Amin'ny ho avy dia hisy loharanom-angovo ambany karbônina bebe kokoa azo ampiasaina.
Na dia tsy azo tsinontsinoavina aza ny tondro fanjifana angovo amin'ny aluminium electrolytic ao amin'ny upstream ny indostrian'ny aluminium, ny zava-dehibe kokoa dia ny fampiharana sy ny fanodinana ny vokatra aluminium manaraka, dia maneho bebe kokoa ny toetran'ny indostrian'ny fanodinana teknolojia avo lenta sy voadio. tsy miaraka amin'ny fitaovana hafa ihany. Ny anjara asan'ny fanoloana, ary naneho ny maha zava-dehibe maitso angovo-mitsitsy vokany eo amin'ny sehatra maro.
Nanomboka tamin'ny 2012, notarihin'ny Fikambanan'ny Indostrian'ny Metaly Nonferrous Shina, dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika "Fanamafisana ny Propagandy Aluminum Maitso sy Fampiroboroboana ny Fanjifana Aluminum" ary namoaka fanambarana "aluminium maitso" ho an'ny fiaraha-monina manontolo. Taorian'ny 9 taona fampandrosoana, "aluminium maitso" dia nankasitrahan'ny mpanjifa. Ny fitaovana aluminium dia nanjary hery vaovao sy hery lehibe ho an'ny fitehirizana angovo, fampihenana ny entona, fanovana sy fanavaozana, ary fampandrosoana ambany karbaona amin'ny fitaterana, fanorenana ary sehatra hafa.
Araka ny antontan'isa mifandraika amin'izany, amin'ny resaka fiara maivana, ny firaka aluminium dia azo ampiasaina amin'ny fiara misy 500kg mahery, izay mety hampihena ny lanjan'ny fiara amin'ny 40%, ary ny fampihenana 10% amin'ny lanjan'ny fiara dia afaka mamonjy manodidina. 3,5%~ 6%, isaky ny 1 litatra ny fanjifana solika dia azo ahena, ary 2,33 kg ny gazy karbonika azo ahena. Hita fa manana tombony miharihary amin'ny fanatsarana ny famoahana karbaona ambany eo amin'ny sehatry ny fitaterana fiara. Eo amin'ny sehatry ny fanorenana, nahatratra 80 tapitrisa metatra toradroa ny tahiry aluminium formwork ao amin'ny fireneko, miaraka amin'ny tsenan'ny 30% amin'ny tsenan'ny trano fonenana avo lenta sy avo. Ny fitomboana haingana amin'ny endrika aluminium dia mahafeno ny filan'ny fiarovana maitso sy ny tontolo iainana amin'ny indostrian'ny fanorenana ary mamonjy hazo be dia be. Ao amin'ny sehatry ny fanaka an-trano, ny fanaka aluminium maitso sy ara-tontolo iainana dia tena heverin'ny tsena. Eo amin'ny sehatry ny aerospace, na fiaramanidina lehibe an-trano izany na amin'izao fanamboarana sy fampandehanana ny tobin'ny habakabaka eto amin'ny fireneko izao, samy tsy afaka manao izany raha tsy misy ny fandraisana anjaran'ny alimo. Ny fitaovana firaka aluminium dia tena ilaina ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny fivoarana haingana ny fitaterana lalamby haingam-pandeha any amin'ny fireneko. Amin'ny sehatry ny fampiharana bebe kokoa toy ny herinaratra sy ny fanorenana an-tanàn-dehibe, dia nisy ihany koa ny fisondrotry ny fanoloana ny alimo amin'ny varahina, ny alimo misy vy, ary ny alimo amin'ny hazo.
Miteny mafy kokoa noho ny teny ny zava-misy. Natosiky ny fitomboana haingana ny tsenan'ny fangatahana, nitombo ny vokatra aliminioma an'ny fireneko tamin'ny taona 2005 ka hatramin'ny 37.08 tapitrisa taonina tamin'ny taona 2020. Nitombo io fitomboana haingana io teo ambanin'ny fepetra mifehy ny macro-pirenena sy ny fitomboana voafehy. Raha tsy misy fitakiana Amin'ity fanohanana mafy ity, dia tsy azo atao ny mihazakazaka haingana toy izany. Raha tsy misy ny fampandrosoana maharitra ny indostrian'ny aluminium electrolytic, dia mety ho sarotra ho an'ny sehatra fampiharana hafa ny manana antoka ara-pitaovana mora vidy sy avo lenta.
Amin'izao fotoana izao, ny adihevitra momba ny "avo roa sy renivohitra iray" dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny lazan'ny indostrian'ny aluminium. Antenaina fa ny fiaraha-monina manontolo dia hiorina amin'ny fiheverana ny rojo indostrian'ny aluminium manontolo sy ny tsingerin'ny fiainana manontolo, hanitsy ny fahatakarana amin'ny lafiny iray amin'ny indostrian'ny aluminium, ary hamantatra ny "aluminium maitso". Toetra tena tsara, hampiroborobo ny fivoarana avo lenta amin'ny indostrian'ny alimo ao amin'ny fireneko.